Imaaraatka oo sheegay in uu arrimaha ammaanka kala shaqeyn doono Yahuuda.
Xoogag jihaadi ah oo weeraray saldhig kuyaal gobolka Mandheera.
Akhriso: Saaxiibada Farmaajo oo ku badan Xukuumadda cusub ee Rooble.
Wednesday August 26, 2020 - 18:52:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xukuumadda dabadhilifka imaaraatka carabta ayaa sare uqaadday u adeegidda maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku haysa dhulalka muslimiinta falasdiin.
Kaaliyaha Wasaaradda arrimaha dibada imaaraatka ninka lagu magacaabo Cumar Gayaash ayaa sheegay in dowladdiisu ay dhanka isku xirka ammaanka ka gacansiin doonto waxa loogu yeero israa'iil wuxuuna caddeeyay in tallaabadan ay qeyb ka tahay caadiyaynta cilaaqaadka labada dhinac.
"waxaa jiri doono iskaashi dhanka amniga ah oo qeyb ka ahaa heshiiskii weynaa ee nadhaxmaray iyadoo ay jirto xiisadaha ay iiraan ka abuurayso mandiqadda" waxaa sidaas yiri kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda imaaraatka oo wareysi siinayay shabakada Fox News.
Xukuumadda Abu Dubai waxay ku faanaysaa in xiriirka ay layeelatay Yahuudda uu waacusub oo dhanka nabadda ah unoqon doono mandiqadda loo bixiyay bariga dhexe iyadoona durbadiiba bilaawday in ay dhaliisho dowladda shiicada iiraan oo uu xiriir qota dheer kala dhaxeeyay sanadadii lasoo dhaafay.
Laamaha sirdoonka iyo ammaanka Imaaraatka ayaa durbadiiba bilaabay in ay yahuudda kala shaqeeyaan baacsiga xoogaga muqaawamada filasdiin ee dibad joogga ah.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiil ka socda sirdoonka xukuumadda Abu Dubai ay booqdeen magaalada talaabiin ayna heshiiskii dhanka jaajuusnimada ah lasoo galeen Yahuudda.
13-kii bishaan agoosto ayay aheyd markii madaxweynaha Mareykanka uu iclaamiyay in yahuudda iyo imaaraadta carabta ay yeesheen xiriir dhan walba ah kadibna dhaxal sugaha imaaraatka ayaa xaqiijiyay in ay saaxiibo noqdeen waxa loogu yeero israa'iil oo ah cadawga ugu daran ee muslimiintu leeyihiin
Mareykanka oo sheegay in duqeyn xagga cirka ah uu ku beegsaday Taliban.
Azarbijaan iyo Armeeniya oo heshis xabad joojin ah kala saxiixday.
Uhuru Kenyatta oo laga sugayo in uu kala diro Baarlamaanka iyo inkale.
Uhuru Kenyatta oo sheegay in uu diidayo duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka ka geystaan gudaha Kenya.
Saraakiil siyaabo kala duwan loogu dilay xaafado katirsan Muqdisho.